Wonke umuntu ufuna umsebenzi omuhle kakhulu nemfundo ezowasiza ukuba ahambe kude. Kodwa-ke, abantu abaningi kufanele bancame umsebenzi wabo nezinjongo zokufundisa unyaka nonyaka. I-CMOAPI iyazi ukuthi ibaluleke kangakanani imfundo efanelekile, yingakho sisiza ukufundisa abafundi bethu ngezithombe nemikhiqizo yamakhamera ngezibuyekezo nezincomo zethu. Awudingi ukukhokha kakhulu ngemishini yakho uma usebenzisa izinsiza zokubukeza esikunikeza zona lapha.
I-CMOAPI Scholarship yethu iphromoshini entsha esiziqhenya ngayo ukuyimemezela. Yimali eyi- $ 2000 yeminyaka eyenzelwe ukusiza abafundi ukufeza amaphupho abo emfundo nawomsebenzi. Le mfundaze izonikezwa umfundi oyedwa ngonyaka ukusiza ukukhokhela izindleko zemfundo. Silindele ukuphinda kabili inani lemfundaze ngonyaka olandelayo. I-CMOAPI Scholarship isinyathelo esincane ukusuka eceleni kwethu ukusiza umfundi enze iphupho labo. Uma unentshisekelo kuhlelo lwethu lwe-scholarship futhi ufuna ukubamba iqhaza emncintiswaneni, sicela ufunde lonke ulwazi olunikezwe ngezansi ngokucophelela.
·Ukwamukela noma okwamanje ukuya ekolishi evunyelwe uhlelo lwe-full-graduate noma lwe-graduate e-United States.
·I-GPA encane yokuqoqa ye-3.0 (noma okulinganayo).
·Kudingeka ubufakazi bokuthi ubhalisele izifundo zobudokotela noma iziqu zokuqala.
Sifakwa Kanjani Isicelo
·Bhala indatshana esihlokweni esithi "Kuyini ukuKhombisa ngokwezifiso nokucwaninga kwesivumelwano?"
·Kufanele uthumele indatshana yakho kithi ngomhlaka 7 Disemba 2020 noma ngaphambi kwawo.
·Ungathumela indatshana yakho (ngefomethi ye-MS iZwi kuphela) nge-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe]
·Ungakhohlwa ukusho igama lakho, i-imeyili nenombolo yocingo ohlelweni lwakho lokusebenza.
·Uyacelwa futhi ukuthi usho imininingwane yakho yasekolishi / eyunivesithi kuhlelo lwakho lokusebenza.
·Kuyi-eseyi kuphela ezoba eyingqayizivele neyakhayo ezobhekelwa umncintiswano.
·Owinile kuzothintwa nge-imeyili futhi kufanele aphendule kungakapheli izinsuku ezi-5 ukuze wamukele umvuzo. Uma kungekho mpendulo etholakalayo kulesosikhathi, kuzokhethwa omunye ophumelele ukuthola umklomelo esikhundleni salokho.
·Kuphela ama-eseyi azokwamukelwa ngaphambi nangesikhathi sokugcina okufanele abhekelwe lo mncintiswano.
·Ama-eseyi azokwahlulelwa ngamapharamitha amaningi. Ezinye zazo yilezi: ukwahluka, ubuqambi, ukucabanga, ukubaluleka kolwazi olunikeziwe, uhlelo lolimi kanye nesitayela njll.
·Abaphumelele bazomenyezelwa ngoDisemba 15, 2020.
Umgomo wethu Wobumfihlo:
Siyaqiniseka ukuthi alukho ulwazi lomuntu siqu lwabafundi olwabiwe, futhi lonke ulwazi lomuntu siqu lugcinelwa ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela. Asinikezi imininingwane yabafundi kwabanye abantu nganoma yisiphi isizathu, kodwa sinelungelo lokusebenzisa izihloko ezithunyelwe kithi nganoma iyiphi indlela esifisa ngayo. Uma uhambisa i-athikili ku-CMOAPI, usinika wonke amalungelo okuqukethwe, kufaka phakathi ubunikazi bokuqukethwe okushiwo. Lokhu kuyiqiniso noma ngabe ukuhanjiswa kwakho kwamukelwa njengophumelele noma cha. I-CMOAPI.com inelungelo lokusebenzisa wonke umsebenzi owethulwe ukushicilelwa njengoba ibona kufanele nalapho ibonwa kufanele khona. Abaphumelele kuzoqinisekiswa uma sebenganikeza ubufakazi bokubhalisa eyunivesithi evunyelwe, ekolishi noma esikoleni. Lokhu kufaka phakathi isithombe se-ID yomfundi yamanje, imibhalo yesikole, incwadi yobufakazi, nekhophi lomthethosivivinywa wokufunda. Ozonqoba owesibili uzokhethwa uma owophumelele kuqala engakwazi ukunikeza lobu bufakazi.